Ny fifohazam-panahy na fifohazana kristiana na revivalisma dia fihetsiketsehana mahakasika olona maro (ara-piaraha-monina na eo amin' ny fiangonana, isan-toerana na isam-pirenena na manerana izao tontolo izao) izay mikendry ny fihavaozana ara-panahy sy ny hamohazana ny finoana matory sy tsy mitombo ary mandeha am-pahazarana. Ireo fihetsiketsehana ireo dia niseho eny antsefatsefaky ny tantaran' ny protestantisma ary niseho matetika sady matanjaka izy ireo ao Etazonia nanomboka tamin' ny taonjato faha-19. Manome lanja ny fitiavam-bavaky ny tsirairay ara-pahavelomana sy ara-pihetseham-po izay fohazina hiala amin' ny finoana heverina fa lefy hery ireo fihetsiketsehana ireo.
Ny fifohazam-panahy dia famerenana amin' ny laoniny ny fiangonana mba hanam-pifandraisana velona amin' Andriamanitra taorian' ny fotoana nampitontongana ny fitondran-tena. Ny fiovam-pon'ny olona maro amin' ny fotoana iray dia heverin' ireo mpitarika ny fihetsiketsehana fa hisy vokany ara-pitondran-tena.
Raha momba ny Fiangonana tamin' ny Andro Vaovao dia iadian' ireo mpahay tantaram-piangonana hevitra sady ezahiny fantarina ny vokatr' ireo fifohazam-panahy tao Etazonia sy tamin' ny firenana hafa. Nandritra ny taonjato faha-18 sy faha-19 dia niatrika fifohazam-panahy maro dia maro ny vahoaka tao Etazonia nanodidina ny taona 1727, 1792, 1830, 1857 ary 1882. Isan' ireo fifohazam-panahy niseho vao tsy ela tamin' ny taonjato faha-20 ny Fifohazam-panahy galoà tamin' ny taona 1904 sy 1905, ny Fifohazam-panahin' i Azusa Street tamin' ny taona 1906, ny Fifohazam-panahin' ny Balokole (ao Afrika) tamin' ireo taona 1930 izay natombok' i Simeon Nsibambi, ny Fifohazam-panahin' ny Vahoakan' i Jesosy (anglisy: Jesus people na Jesus movement) tao Etazonia tamin' ireo taona 1970, ny Fifohazam-panahin' i Bario tamin' ny taona 1971 ary ny Fifohazam-panahy tao Silý tamin' ny taona 1909, izay niely any Amerika Atsimo, any Amerika Avaratra, any Afrika ary any Azia, teo amin' ireo Protestanta sy Katolika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifohazam-panahy&oldid=998835"
Dernière modification le 10 Desambra 2020, à 14:37
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2020 amin'ny 14:37 ity pejy ity.